सरकारले भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेख्या हो ? : राजेन्द्र महतो
वि.सं २०७६ मङ्सिर २५ बुधबार
२०७६ बैशाख २२ आइतबार १४:३१:००
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले संविधानमा कसैको विमति नरहेको भन्ने सरकारको भनाइ प्रति गम्भीर आपत्ती जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा ७ नम्बरको बुँदालाई लिएर सांसद राजेन्द्र महतोले संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा विमति नरहेकोबारेमा जनाएका हुन् ।
‘कसरी विमति छैन ? कहिलेदेखि विमति नभएको हो ? कसरी लेख्यो यो नीति कार्यक्रम ? आधा निन्द्रामा लेख्या हो कि कसो हो ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो संविधानमा विमति छैन रे ? पचासौँ पटक यो हाउसमा हामीले नै विमति देखाएको । त्यो संविधानमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर विमति जनाउने पुष्पकमल दाहाल सरकारी पक्ष नै हो । फेरि नीति कार्यक्रममा कसरी विमति छैन भनेर लेखियाे ?’
संविधानप्रति व्यापक असन्तुष्टी र विमति रहेको स्पष्ट हुँदा हुँदै विमति नभएकाे लेखिएकोमा आक्रोस पोखे । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकार संविधान नै संसोधन नगर्ने मनस्थितिमा रहेको सन्देश पाएको उनले बताए । ‘भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेख्या हो ?' उनले प्रश्न गरे । ‘संविधानलाई जब जब बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत बनाउने कोसिश हुन्छ,' उनले भने, ‘तब त्यो संविधान गइजान्छ । बाइबाई भइजान्छ ।’
सरकारले जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम झुटको खेती जस्तै छ । सफेद झुट भन्छ नि सफेद झुट । जनताको अधिकारमाथि दिन दहाडै डकैती । जनतालाई ढाट्ने । जनतालाई गुमराह गर्ने ।’ उनले शाही सम्बोधनको शैलीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरे ।
#सरकार # नीति तथा कार्यक्रम # राजेन्द्र महतो
मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध : गृहमन्त्री
मानवअधिकारको सवालमा चुक्दै सरकार
जापानले बनाइदिएको सय बेडको भवनका लागि १५ करोडका उपकरण किन्न वीरलाई सरकारको अनुमति
निजीजस्तै महँगो सरकारी अस्पताल
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन्–केन्द्रीय सरकारलाई फेवाताल दुख्दैन
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्पिटल लगियो
घुस लिने दोलखाका सिडिओ निलम्बित
भ्रष्टाचारका १५ सय फाइलमाथि विस्तृत छानबिन गर्दै अख्तियार : कर्मचारीमा जागिर खाएको दुई–चार वर्षमै करोडपति हुने प्रवृत्ति
आगामी असारदेखि फास्ट ट्र्याक निर्माण सुरु
मृत्युदण्ड वा इन्काउन्टर समाधान होइन